မေတ္တာရပ်ဝန်း: တရားကို စမ်းပြီး ထိုင်ဘူးကြည့်ချင်သူများအတွက် တရားရှုမှတ်နည်း
လာရောက်ကြသူတွေရော မလာနိုင်သူတွေပါ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ
တရားကို စမ်းပြီး ထိုင်ဘူးကြည့်ချင်သူများအတွက် တရားရှုမှတ်နည်း
Yesterday at 15:04 ·
ယခု မျက်မှောက်ကာလမှာတော့ ဝိပဿနာ အားထုတ်ကြသူ များပြ...ားလာသည့်အလျောက်၊ တစ်ချို့ တစ်ချို့ သော ပုဂ္ဂိုလ်များက လည်း မိမိတို့ နဲ့ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း တွေ က ဝါတွင်းမှာ ဥပုဒ် သီလစောင့်တည်ကြတာတွေ၊ တရားတွေ အားထုတ်လာကြတာတွေ ရှိလာကြတော့ တရားနဲ့ ဝေးကွာနေသူမဟုတ်ပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူများတွေလို တရားအားမထုတ်ဖြစ်ဘဲ.. အသက်ကလေးကရလာလို့ ၊ ကျန်းမာရေးလေးက ချို့ ယွင်းစပြုလာလို့ စတဲ့ ခုလိုအချိန်ကျမှ မိမိရဲ့ စိတ်သဏ္ဌန်မှာ သူတို့ တွေလို တရားထိုင်ချင်စိတ်၊ တရားကို စမ်းပြီး အားထုတ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တရားဘယ်လို အားထုတ်ရတယ် ဆိုတာ တစ်ခြားသူကို မေးမြန်ဖို့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် မေးဖို့ အခက်ခဲရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ ဖြစ်စေ၊ဖြစ်စေ..ခဏ ဘဲ တရားထိုင်ထိုင်၊ စမ်းသပ်ကြည့်ယုံလောက် သဘောနဲ့ ဘဲ ထိုင်ထိုင်၊ တရားအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တော့ ဖြင့် တရားအားမထုတ်တဲ့ သူ ထက်သာတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့နော် ။
အဲဒီလို စမ်းပြီး တရားထိုင်ချင်သူ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ အတွက် မိမိတို့ အားထုတ်မှု အချိန်ကို မလစ်ဟင်းစေဖို့ အတွက် ဘယ်လို ရှုမှတ်ရင်း အကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံး ဆိုတာ ကို ရေးသားပြီး ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်။
◆ တရားထိုင်တယ် ဆိုတာဟာ အလွယ်ဆုံး ပြောရရင် စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေအောင် လုပ်တာပါ.. လို့ ဘဲ လောလောဆယ်မှတ်ထားလိုက်ပါ။
အရင်ဆုံး သိထားရမှာက အဲဒီလို "ငြိမ်သက်နေတာ" က စိတ်ရဲ့ သဘာဝရဲ့ အခြေခံ ပုံစံ ဆိုတာပါပဲ။ အချိန်ကြာကြာ နဲ့ အလေ့အကျင့် များများ တရားထိုင်လေလေ၊ စိတ်ကို အားမစိုက်ရပဲ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်လာလေလေပါပဲ။
အခုမျက်မှောက်ခေတ်ကာလ အနေ နဲ့ ကတော့ တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင် နေရာလေးဟာ သေးသေးလေးပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ စိတ်အားတက်ကြွစေပြီး တန်ဖိုးထားစရာ နေရာလေးလို ဖြစ်ရင်ဘဲ ရပါပြီ။ အသံဆူဆူညံညံ မရှိဘူး၊ နှောင့်ယှက်သူ မရှိတဲ့နေရာလေးဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ "့ငါ ( ၁၅ ) မိနစ် စထိုင်မယ်"ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။
"ငါ ဒီနေရာကို တရားထိုင်ဖို့ ရောက်နေတယ်"..
ဆိုပြီး သတိကပ်ထားပါ။ တခြားအာရုံတွေ ဝင်မလာပါစေနဲ့။ တရား မထိုင်ခင်မှာ အဲဒီလို စိတ်ထားမျိုးနဲ့ စိတ်ကို အာဟာရ အားဖြည့်ပေးထားရပါမယ်။
ထိုင်တဲ့ ပုံစံ အနေနဲ့ ..
ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာ တရားကို စမ်းပြီးထိုင်ကြည့်မှာဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်သလို သက်တောင့် သက်သာဖြစ်ရင်ဘဲ ရပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က တရားထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အလျောက်..
တရားအလုပ် လုပ်တာကို တရားတဲ့ နည်းနဲ့ သွားတာ သင့်တော်တယ်လို့ တော့ အကြံပြုပါရစေ။
တချို့ က ဘောင်းဘီ နဲ့တရားထိုင်ကြတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာက ဘောင်းဘီအတို နဲ့ တရားထိုင်ကြတာတွေ မကြာမကြာ တွေ့ နေရပါတယ်..( မြန်မာပြည်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာတွေ့ ရတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက တရားစခန်းတစ်ချို့ မှာပါ ) ဘောင်းဘီအတို နဲ့ တရားမထိုင်ရဘူးရယ်လို့ တော့ ပညတ်ချက် မရှိပါဘူး။ သို့ သော် အကြည့်ရဆိုးတာပေါ့နော်။ အမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်လို့ ခံယူထားတဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ် ကိုယ်ဖာသာကိုယ် မလေးစားရာ ရောက်ပါတယ်။ဘေးလူအမြင်မှာလည်း အထင်သေးစရာပေါ့နော်..။
တရားမှာလည်း သူ့ အိနြေ္ဒ နဲ့ သူ ရှိပါတယ်။တကယ်တန်း ကျင့်ကြံအားထုတ်လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုယင် နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လုံချည်ဝတ်ပြီး နဲ့ တရားအားထုတ်ဖို့ တော့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
◆ ဦးစွာ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်ပြီး ခါးကို ၉၀ ဒီကရီ မတ်မတ်ထားပါ၊ ခါးကို မတ်မတ်ထားခြင်းက တရားအားထုတ်ခါစ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အလေ့အကျင့်မရှိတော့ မကြာခင် သူများတွေထက်စောပြီး နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကို အရင်ဆုံးခံစားရမှာပါ။ အဲဒီလို ခါးကို မတ်မတ်ထားခြင်းဟာ ဝေဒနာပေါ်လာမှုကို နှောက်နှေးစေပါတယ်။ ဝေဒနာ မရှိသေးတဲ့အချိန် မှတ်ရှုရတဲ့အခါ မှ သမာဓိ အားကောင်းပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှု ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာရစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခါးကို မတ်နေအောင် ထားပါလို့ အကြံပြုတာပါ။
လက်ဝါး နှစ်ဖက်ကို ပေါင်ပေါ်မှာ ဘယ်လက်ဝါး ပေါ်၊ ညာလက်ဝါး က ယှက်တင်ထားပြီး လက်မထိပ်ခြင်းကို ထိထားပါ။ ဘာကြောင့်လက်မထိပ်နှစ်ခု ထိ ခိုင်းထားရသလဲ ဆိုရင် ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာ ဆက်လက်အားထုတ်လာချင်စိတ်ဖြစ်လာရင် နောက်ပိုင်း အားထုတ်တဲ့ အခါမှာ လက်မခြင်း ထိနေတဲ့ နေရာကို ရှုမှတ်ရတဲ့ ကမ္မဌာန်းတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်လို့ ပါဘဲ။
◆ ပထမဆုံး မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အရင်ဆုံး စိတ်ထဲကနေ စိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့..နှာခါင်းထိပ်ဝ ကို စိတ်ကို ညွှတ်လိုက်ပါ။
ဖြည်းဖြည်းခြင်း လေရှုသွင်းလိုက်ပါ။ အဲဒီ လေ ရှု သွင်းလိုက်တဲ့ "လေ"အတန်းလိုက် လေးက မိမိရဲ့ နှာခေါင်းကနေပြီး " ဝင်သွားတာကို တောက်ရှောက် သတိထားမိမယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခုန ဝင်သွား တဲ့ လေလေးကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ပြန်ရှုထုတ်ပါ၊အဲဒီမှာလဲ ခုန ဝင်သွားတဲ့ လေ လေး ပြန်ထွက်လာပါလား ဆိုတာကို ပြန်သိနေလိုက်ပါ။"
အဲဒီလို သိနေလိုက်ပြီဆိုရင် ဓမ္မမိတ်ဆွေ ရဲ့ စိတ်ကလေး ခုန လေ အဝင်ထွက်ကို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ကဘယ်မှ မပြေးတော့ပါဘူး.. အဲဒီနေရာမှာဘဲ စိတ်က ရှိနေတာ အသေခြာပါဘဲ...။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။
အဲဒီလို သိတဲ့ စိတ်ကလေး ဘယ်မှ မပြေးအောင် အချိန်ကျတော့...
"ထွက်တိုင်းသိ ဝင်တိုင်းသိ "
ဒီသိတဲ့ စိတ်ကလေး ဘယ်မှ မပြေးအောင် ဓမ္မမိတ်ဆွေ ထိန်းထားပေးပါ။
"ဝိပဿနာအစ ခန္ဓာကိုယ် ဝင်တဲ့ လေလေး၊ ထွက်တဲ့လေလေး သိတာက စတာပါ " ဘဲ..။
◆ ကောင်းပါပြီ။ အဲဒီလို သိနေပြီးလို့ ၅မိနစ်၊ ၁၀မိနစ်တိုင်တိုင် မိမိစိတ်ကလေးဟာ ဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးလို့.....
ဒီလို "ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ကလေးဟာ ထိန်းလို့ဖြင့်ရပြီဟ"လို့ ဆိုရင်တော့..
အဲဒီလို စိတ်ကို ထိန်းနေရင်း နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီး ဟိုကအောင့်သလိုလို၊ ဒီက နာသလိုလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဟိုနေရာက ယားသလိုလို၊ ဒီနေရာမှာ ပိုးကောင်လေး သွားနေသလိုလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဟိုနေရာကလည်း စိတ် ကလေးတစ်မျိုး သော်လည်းကောင်း၊ ကြားတဲ့ စိတ်ကလေးလို လည်း ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
" ထွက်သိ၊ ဝင်သိ မှတ်နေတဲ့ စိတ်ကလေးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ခုန.. အောင့်နေတဲ့နေရာ၊ ယားတဲ့ နေရာကို စိတ်ကို ပို့ လိုက် ပါ "...။
အဲဒီ အောင့်တဲ့ ယားတဲ့ နေရာကို ဓမ္မမိတ်ဆွေ တို့ တွေ့ လိုက်တော့..
ဒီအောင့် တာလေးကလည်း နဂိုကအောင့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှ ဖောက်ပြန် ပျက်စီးပြီး ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်...နဂိုတုန်းကမရှိဘူး..အခုမှဖြစ်လာတာပါ။ အခုမှ ဖောက်ပြန်လာတာပါ။ အဲဒီလို ဖောက်ပြန်တာကို သေသေခြာခြာ ဥာဏ်နဲ့ ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီဖေါက်ပြန်တာကြီးကလည်း ကြာကြာမမြဲဘူး ပြန်ပြီးပျက်စီးသွားတာ တွေ့ ရလိမ့်မယ်။
ဉာဏ်မပါဘဲ နဲ့ ရိုးရိုးပြောမယ် ဆိုရင်.. " ခုန နာနေတာက သက်သာပြီး ပျောက်သွားတယ်" ပေါ့။
အဲဒီလို တွေ့ လိုက်တဲ့အခါကျတော့....
ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတာက ဒုက္ခသစ္စာ
ဖောက်ပြန် ပျက်စီးမှုကို သိတာလေးက လောကီ မဂ္ဂသစ္စာ..တဲ့။
◆ အဲဒီလို ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတဲ့ စိတ်ကလေးကို ဟိုနေရာပေါ်ရင် ဟိုနေရာလိုက်။ လက်မောင်းပေါ် လက်မောင်း၊ စိတ်ပေါ် စိတ်၊ ကိုယ်ပေါ် ကိုယ်လိုက်။ ဟဒယ ဝတ္ထုပေါ် ဟဒယ ဝတ္ထုလိုက်။ နားထဲပေါ် နားထဲလိုက်။ မျက်လုံးထဲက မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လည်း မြင်စိတ်ကလေးက ခုမှ ပေါ်လာတာ၊ ဖြစ်ပြီး ပျက်တာပဲ။
" ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတဲ့ ဓမ္မလေး ပဲလို့ ဆိုပြီး အသိ လိုက်နေပါ"
◆ အဲဒီလို လိုက်မှတ်နေလို့ လိုက်မှတ် စရာ မရှိတော့ ၊ ဘယ်နေရာမှ မပေါ်လာဘူးလို့ ဆိုလို့ ရှိရင်တော့ ခုနတုန်းက စိတ်ကလေးကို ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ စိတ်နဲ့တွဲနေတဲ့ ဥာဏ်ကလေးကို ဟဒယဝတ္ထုဆိုတဲ့ ဝမ်းထဲ လှည့်လိုက်ပါ။ ဝမ်းထဲ လှည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့...
"လေကို ထွက်အောင် အားထုတ်တဲ့ စိတ်၊ လေကို အတွင်းပြန်ကို ပြန်ဆွဲယူတဲ့ စိတ်ကလေး နှစ်ခု လှည့်ရှုနေပါ။
ဒါလေးတွေလည်း ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတာပဲ၊ ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတာပဲလို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာ ဥာဏ်နဲ့ လိုက်ပြီးသိနေပေးပါ"
◆ လိုက်မှတ်နေရင်း နဲ့ ဟိုနေရာက ယားတယ်၊ ဒီနေရာက အောင့်တယ်၊ ဒီနေရာက ကျင်တယ်လို့ ပေါ်လာပြန်လို့ ရှိရင်လည်း အဲဒီနေရာတွေကို လှည့်လိုက်။ ဝမ်းထဲက ရှုနေတာလေးဟာ မရှိလည်း..
မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရှုမနေဘဲနဲ့ ပေါ်ရာပြန်လိုက်ပါ။
အဲဒီလို ပေါ်ရာ လိုက်နိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ဟာ "ဖြစ် ပျက်" နဲ့ "ရှုတဲ့ မဂ်" ဟာ တစ်သားတည်း ဖြစ်နေပါပြီ။ ခွဲလို့ မရတော့ပါဘူး။ဝိပဿနာ ဉာဏ်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီလိုဆိုရင် ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့- စိတ်ဟာ....
" ဖြစ် - ပျက် နောက်က မဂ် အစဉ်လိုက်နေပြီ" ဆိုပြီး ဝမ်းသာလိုက်ပါတော့...လို့ ရေးသားယင်း ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
( ခန္ဓာ-၅ပါးတစ်ဦး )
လက်ကိုင်ဖုန်း ဖြင့် စာစီရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် သတ်ပုံမှားယွင်းမှုများ တွေ့ ရှိပါက သည်းခံခွင့်လွှတ်ပြီး ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။(ခန္ဓာ-၅ပါးတစ်ဦး)
ကိုးကား-မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားသော ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပုံ တရားတော်ထဲမှ ကောက်နှုတ်၍ ရေးသားဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by ဒေါ်စိုး at 10:32 AM
စကားထာဆိုသောဝေါဟာရ၏ အနက်ကို အချို့ ပညာရှိများက “စကား+အတ္ထ=စကတ္ထ” တို့မှတဆင့် “စကားထာ”ဟူ၍ ဖြစ်လာကြောင်းပြောပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “ စကား၏ အနက် ”ဟ...
'' ပန်း အမျိုးမျိုး ''
Min Zaw Swe '' ပန်း အမျိုးမျိုး '' (၁) စံပယ်ပန်း = Jasmine (၂) နှင်းဆီပန်း = Rose (၃) သစ်ခွပန်း = Orc...
သဘာဝအတိုင်း အသားအရေ အရွယ်တင်အောင် လှပအောင်။
အသားအရေ လှပ ဆိုပြေအောင် အထူးသဖြင့် မျက်နှာ အသားအရေ လှပအောင် ဇရာရဲ့ အရေး အကြောင်းတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းပြီး လန်းဆန်းနေအောင် ဘာလု...
နတ်ဘ၀ဆိုတာ လူ့စည်းစိမ်နှင့်လားလားမှမဆိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
၁။ ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆင်းရဲ ဆိုတဲ့ ဒုက္ခမရှိပါဘူး။ နတ်သမီးက အသက် ၁၆-၁၈ နှစ်အရွယ်၊ နတ်သားက အသက် ၂၀ အရွယ်၊ဘွားကနဲပေါ်လာတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် နတ်ပြည်...
World of wisdom ပို့စ်မှာ ယခုနှစ်မေ ၂၅ ရက်မှာ ဒကာမတစ်ဦးက မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးများ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း...
ဆိတ်ကွယ်ရာ နှင့် အမှန်တရား။
တိကအင်္ဂုတ္တိုရ်၊ ၄-ဒေ၀ဒူတ၀ဂ်တွင် မြတ်ဗုဒ္ဓက လောက၌ မကောင်းမှုပြုသောသူအား လူသူ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ် မည်သည်မရှိ။ လူတွေမမြင်သော်လည်း နတ်များမြ...
ပညတ် နှင့် ပရမတ် (Apparent Truth and Actual or Real Truth)။
ကုန်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေ ရေထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဥပမာ ငါးတစ်ကောင်ကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် သိပ်သည်းဆများတဲ့ရေရဲ့အလင်းပြန်မှုကြောင့် ...
ဘိက္ခုနီ၏၀ိနည်းတော် ၃၀၁ ပါး ။
ဘိက္ခုနီ (ရဟန်းအမျိုးသမီး) များသည် ရဟန်းယောက်ျားများထက် ၀ိနည်းတော် (၃၀၁-၂၂၇= ၇၄ ပါး) ပိုမိုဆောက်ထိန်းရသည့်အပြင်အောက်ပါ ဂရုဓံ (၈) မျိုးကို...
စိတ် (Mind) ဆိုတာ။
အနောက်တိုင်းဆေးပညာအရ ကျမတို့မှာ သိစိတ် (conscious mind) နဲ့ မသိစိတ် (unconscious mind) ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်၊ စိတ်တွေဟာ ဥဏှောက်ထဲမ...
နယုန်လပြည့် မဟာသမယ အခါတော်နေ့ ဆိုတာ။
သမိုင်းကြောင်း။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကပိလ၀တ်ပြည်နှင့် ကောလိယပြည်မှလယ်သမားများ ရောဟနီမြစ်ရေကို လုရာမှ နှစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်မည့်အချိန်မြတ်ဘုရားကြွလြာ...
Ways to Recognize Fake Honey:
တရားကို စမ်းပြီး ထိုင်ဘူးကြည့်ချင်သူများအတွက် တရား...
မေထုန်ငယ် (၇) ပါး
အသက်ရှည်လေ ပိုကောင်းလေ ဖြစ်ဖို့။
"အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားသော သေခါနီးထိ စိတ်ပြင်ပါ "
မကြာခင် သေမယ်ဆို ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။
_/|\___ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် မိန့်တော်မူသည့် အိမ်သုံးမ...
နောက်တစ်ခါ လူလာဖြစ်ရင် ဒီအခွင့်အရေ...း ဘာမှမရှိ
*** လူ့ဘဝသက်တမ်းဟာအလွန် တိုတောင်းလှပါတယ် ***
သာသနာ့ အလံအသုံးပြုရမည့်နေ့ရက်များ သတ်မှတ်ထားသည်မှာ...
❀﻿ လောကမှာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင် ပြစ...
#ဒီကနေ့ခေတ်မှာ မျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားအတုတင်မကဘူး၊ ...
Facebook ထဲမှာ ရေးပြီးတော့ လိမ်တယ်။
ဓမ္မရတနာLike Page6 September at 22:29 · “ သေချိန်ကိ...
❀﻿ ❀﻿ သာဓုခေါ်မှု အကျိုးပြု ❀﻿ ❀﻿
ဘာ့ကြောင့် လူသေရင် ၃ ရက်ထားကြတာလဲ....??
တရားအားထုတ်ရတာ ပင်ပန်းတယ်ထင်လို့ နေ့တိုင်းမလုပ်ဖြစ...